Real Madrid oo caawa laga badiyay, una soo baxday Wareega 8-da ee Champion League. | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Real Madrid oo caawa laga badiyay, una soo baxday Wareega 8-da ee...
Real Madrid oo caawa laga badiyay, una soo baxday Wareega 8-da ee Champion League.
Kooxda Real Madrid oo ay ciyaar waali ahi Bernabeu ku dhexmartay kooxda Schalke 04 ayaa iyada oo ay guuldaro soo gaadhay u soo baxday wareega sideed dhamaadka Champions leaque-ga. Kulankan oo ahaa mid ka yaabiyay dadkii daawanayay ayay kooxda martida ahayd ee Schalke 4:3 ku guulaysatay laakiin Real Madrid ayaa celcelis ahaan ku soo baxday 5:4. Schalke ayaa tartanka ka hadhay iyada oo soo bandhigtay qaab ciyaareed lala yaabay isla markaana guuldaro gadhka ugalisay Real Madrid.
Cristiano Ronlado ayaa isaguna rekoodh cusub ka dhigay gool dhalinta Yurub kadib markii uu laba gool ka dhaliyay kulanka sidaana Ronaldo ayaa noqday ciyaartoyda ugu gool dhalinta badan tartamada Yurub.
Real Madrid ayaa garoonkeeda Santiago Benabeu ku soo dhawaysay kooxda Schalke04, kulanka lugta labaad ee Champions leaque-ga. kulankii hore ayay Real guul 2:0 ahayd ka soo gaadhay Schalke.Los Blancos ayaa doonayay inay guul ka gaadho Schlke si ay u barbarayso rekoodhka ah 12 ka kulanka ee isku xiga ee ay kooxi gurigeeda ku guulaysatay.
Real Madrid oo ay kulankii horyaalka guuldaro ka soo gaadhay Athletic Bilbao ayaa doonaysay in ay guul ka gaadho Schalke si ay kalsoonidu ugu soo laabato.Ancelotti ayaa shaxdiisa ku bilaabay Khedira oo dhaawac ka soo laabtay halka Modric uu ka mid yahay ciyaartoyda kursiga kaydka. Marcelo ayuu tababare Ancelotti kursiga kayka dhigay, laakiin Cristiano, Benzema iyo Bale ayaa dhamaantood safka weerarka Madrid ku bilawday.
Kulankan oo ahaa mid xiiso badan ayay Real Madrid markiiba ku bilaabatay xamaasad badan iyo waliba fursado ay abuurtay. Schalke ayaa iyaduna kaga jawaabtay fursado iyo waliba haliso badan oo ay galisay Casillas, iyada oo ciyaaraysay kubbad weerar deg deg ah ku dhisan.Schalke ayaa fursado badan oo halis ahaa iska qasaarisay.
Kadib markii ay sida roobka ugu da’aysay goolka Real Madrid isla markaana ay fursado badan iska qasaarisay ayay ugu danbayn Schalke04 la timid goolka furitaanka, waxaana daqiiqadii 20 aad gool udhaliyay Christian Fuchs kaas oo kubbad aan la duwi karin ku darbeeyay Casillas, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Schalke kula timid goolka furitaanka. Real Madrid ayaa u muuqatay inay ku dhibtootay kubbad aan weerarka kala joogsiga ah lahayn.
Real Madrid ayaa dadaal u gashay sidii ay iskaga soo celin lahayd goolka looga hormaray, waxayna goolka barbaraha la timid daqiiqadii 25 aad kadib markii uu gool madax ah udhaliyay Cristiano Ronaldo, wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 1:1 ah. Ronaldo ayaa goolkan ku dhaliyay kubbad koorne ahayd oo uu Toni Kroos soo tuuray.
Goolkan ayaa ahaa goolkii 40 aad ee uu Ronlado xili ciyaareedkan Real Madrid udhaliyay tartamada oo dhan, wuxuuna goolkani ahaa goolkii 77 aad ee uu Ronaldo ka dhaliyay tartamada yurub, wuxuuna sidaa ku dhigay rekoodh cusub oo ah inuu noqday ciyaartoyga Yurub oo dhan ugu goolasha badan. Ronaldo ayaa rekoodhkaas kala wareegay Lionel Messi iyo Raul oo min 76 gool leh.
Daqiiqadii 29 aad ayay dhib horlihi soo gaadhay Schalke kadib markii uu dhaawac ka soo gaadhay Eric Maxim Choupo-Moting kaas oo dhibaato badan ku hayay Real Madrid waxaana lagu soo badalay Leroy Sané.Markale ayay Schalke bilawday weerar duufaan ah iyada oo uu furad gool loo fishay Varane kooxdiisa ka badbaadiyay.
Laakiin wax yar kadib ayay haddana Schalke soo qaaday weerar halis ah, kaas oo keenay inay markale hogaanka ciyaarta la wareegto. Daqiiqadii 40 aad ayuu Klaas-Jan Huntelaar kooxdiisa udhaliyay goolka labaad, wuxuuna markiisa ciyaarta ka dhigay 2:1 ay markale Schalke hogaanka kula wareegtay.
Meyer ayuu marka hore Casillas ka badbaadiyay laakiin Jan Huntelaar ayaa kubbad si fiican u dhalaystiray oo inta uu Varane ka cidhiidhsaday kooxdiisa goolka labaad ugu dhaliyay.Ciyaarta ayaana gashay xaalad waali ah iyada oo xamaasadu cirka isku sii shareertay.
Laakiin hogaanka Schalke ayaan markale sii waarin, waxaana markale jawaabtii hore mid la mid ka ka celiyay Cristiano Ronaldo kaas oo daqiiqadii 45 aad kooxdiisa markale gool madax ahaa ugu dhaliyay goolka barbaraha, wuxuuna ciyaarta haddana u badalay barbaro 2:2 ah. goolkan ayaana ahaa goolkiisii 78 aad ee tartamada Yurub.
Kubbad uu ka helay Fabio Coentrao ayuu Ronaldo si fiican madaxa ugu darbeeyay, sidaana wuxuu markale ciyaarta ku soo celiyaya barbaro. qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 2:2 ah, laakiin celcelis ahaan ay Real Madrid ku hogaaminaysay 4:2.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Real Madrid bilawday sidii ay ciyaarta u dili lahayd ee ay ula iman lahayd goolka kalsoonida isla markaana ay guul u gaadhi lahayd.Daqiiqadii 52 aad ayuu Karim Benzema markiisa Real madrid udhaliyay goolka ay markeeda hogaanka kula wareegtay, wuxuuna ciyaarta u badalay 3:2 ay Real Madrid markeeda hogaanka kula wareegtay.
Schalke ayaa iyaduna markeeda si deg deg ah ugaga jawaabtay goolka looga hormaray, waxayna goolka barbaraha la timid daqiiqadii 57 aad kadib markii uu gool layaableh Schalke udhaliyay da’yarka 19 jirka ah ee Leroy Sané kaas oo ciyaarta badal ku soo galay. da’yarkan ayaa goolkan ka dhaliyay meel ka baxsan xerada ganaaxa madrid , waxayna ciyartu markale noqotay barbaro 3:3 ah. ciyaarta ayaa noqotay mid aan la saadaalin karin isla markaana gashay heer cajiib ah.Casillas ayaana daawanayay kubbad oo sii galaysa shabaqa uu ilaalinayay.
Layaabka ciyaarta ayaa halkiisa ka sii socday, waxaana rajada Schalke soo nooleeyay Klaas-Jan Huntelaar kaas oo markale kooxdiisa udhaliyay goolka ay hogaanka kula wareegtay ee afaraad.Jan Huntelaar ayaana gool aad uqurux badan kooxdiisa udhaliyay. waxayna ciyaartu noqotay 4:3 ay markale Schalke hogaanka kula wareegtay. waxaana markan Schalke looga baahnaa gool kaliya si ay wareega xiga ugu soo baxdo.
Real Madrid ayuuna xaalku ku adkaaday, waxayna markale fursad gool loo fishay ka badbaadiyay Casillas.Real Madrid ayuu culays badani fuualay waxayna isku dayday inay difaac gasho.Casillas ayaana fursado halis ah oo goolal loo fishay oo isdaba joog ahaa badbaadiyay.Dhamaadka ciyaarta ayaa ahaa mid wadno xanuun ah isla markaana ay xaaladu nolo iyo geeri udhaxaysay.
Ugu danbayn ciyaarta layaabka lahayd ee dhex martay Real Madrid iyo Schalke ayaa ku dhamaatay 4:3 ay Schalke guul kaga gaadhay Real Madrid oo joogtay garoonkeeda Santiago Bernabeu laakiin Real Madrid oo hore kulankii hore guul 2:0 ahayd ka soo gaadhay Schalke ayaa celcelis ahaan ku soo baxday 5:4. Real Madrid iyo Porto ayaa noqday labada kooxood ee wareega sideed dhamaadka Champions Leaque-ga u soo baxay.
Kooxda Porto ayaa gurigeeda ku xasuuqaday kooxda Basel oo marti ugu ahayd, porto ayaa guushan ku gaadhay 4:0, waxayna iska xaadirisay wareega sideed dhamaadka Champions leaque-ga. Porto ayaa celcelis ahaan ku soo baxday 5:1.
Kooxaha Porto iyo Basel oo kulankii lugtii hore ee lagu ciyaaray garoonka Basel barbaro soo galay ayaa iyaguna iskaga hor yimid kulanka lugta labaad ee Champions Leaque-ga.Porto oo garoonkeeda ku soo dhawaynaysa Basel ayaa doonaysa inay u soo baxdo wareega sideed dhamaadka Champions leaque-ga, waxaana caawinaysa goolkii ay ku soo dhalisay garoonka Basel.
Daqiiqadii 14 aad ayay Porto ciyaarta hogaanka u qabatay kadib markii uu gool cajiib ah udhaliyay xidiga xulka qaranka Algeria ee Yacine Brahimi, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Porto hogaanka kula wareegtay.
Kadib markii qalad halis ah lagu galay xidiga Barcelona amaahda kaga maqan ee Cristian Tello ayuu Brahim kubbad laaga xorta aahyd kooxdiisa ugu dhaliyay goolka furitaanka, wuuxuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Porto oo gurigeeda joogtay hogaanka kula wareegtay.
Daqiiqadii 22 aad ayay Porto dhibaato soo gaadhay kadib markii ciyaarta dhaawac looga dhex qaaday xidiga la sheegay inay Real Madrid heshiiska hor dhaca ah la gaadhay ee Danilo kaas oo lagu soo badalay Bruno Martins Indi. qaybta hore ee ciyaarta ayaana ku dhamaatay 1:0 ay Porto gacanta sare ku lahayd.
Xidigan ayuu soo gaadhay dhaawac halis ahi kaas oo keentay in cisbitaal loogula cararo baabuurka bukaan la cararka ee loo isticmaalo in lagu qaado dadka xaaladoodu halista tahay.
Qaybtii dambe markii ay saddex daqiiqo oo kaliya socotay ayuu H. Herrera kooxdiisa Porto udhaliyay goolka labaad, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:0 ay hogaanka ku dheeraysatay, waxaana goolkan caawiye ka ahaa Brahimi oo goolka furitaankana udhaliyay. Brahimi ayaa sideed gool oo ay Porto ka dhalisay Champions leaque-ga ku luglahaa. Shan gool isaga ayaa dhaliyay halka uu saddex kalena caawiye ka ahaa.
Daqiiqadii 56 aad ayay Porto ciyaarta dishay waxaana goolka Basel dhulka ku sii jiiday ee saddexaad udhaliyay Casemiro kaas oo ciyaarta ka dhigay 3:0 ay Porto ku dhibaataynayso Basel. Waxaana goolka afraad sii raacsaday Vincent Aboubakar kaas oo ciyaarta ka dhigay 4:0 ay Porto ku xasuuqayso Basel. ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 4:0 ay Porto ku gumaaday kooxda martida u ahayd ee Basel, sidaana waxay ugu gudubtay wareega sideed dhamaadka.